Fantsom-bokatra varahina miaraka amin'ny rafitra fanodikodinam-bidy
Home / Applications / Induction Brazing / Fantsom-by vita amin'ny varahina misy induction
Fantsom-bokatra varahina misy induction
Sokajy: Induction Brazing Tags: brazing copper, bozaka varahina, fantsom-barahina vita amin'ny varahina, fantsom-brazing, mividy heater varahina, Mividiana heater brazing fampidirana, mividy brazer varahina RF, fantsona varahina fantsona, induction brazing pipe, fantsom-brazing fampidirana, fantson-drano mikotrika, vidin'ny brazer varahina fampidirana
mampiseho fantsona varahina fantsona ary manahirana amin'ny fampiasana ny rafitra DW-UHF-10 kW sy ny coil laboratoara azo zahana
• Fantsom-borona - Tube Fisotroana
• Pisy manetona
Silo: eo ho eo ny 1500 ° F (815 ° C)
Fotoana: 5 - 5.2 sec
Satria fivoriambe iray ihany no nomena ho an'ny fitsapana dia amboarintsika ny fanandramana amin'ny fampiasana rindrina matevina 5/16 "fantsona varahina toy ny fantsona iray izay nanaiky ny iray amin'ny faran'ny loaka misokatra. Ny fotoanan'ny hafanana dia tombanana amin'ny fampiasana loko tempila mba hilazana ny mari-pana. Ny fivoriam-panadinana, (narahin'ireo singa natolotra) dia nivory niaraka tamin'ny sarina iray vita tamin'ny velaran-tsipika 505 alloy brze ary napetraka tao anaty coil test test isaky ny sary napetaka. Ny tsingerin'ny hafanana 5 - 5.2 segondra dia hita nivezivezy tamin'ny alloy ary nanao ilay joint .
Araka ny naseho, ny maodely DW-UHF rafitra fanetren-tena dia afaka manafana na ny fantsona lehibe indrindra na kely indrindra mankany amin'ny fantsom-pandrefesana mba hamenoana ny fitambaran-jaza Ny fotoanan'ny hafanana mampiasa coil fitsapana misy dia ao anatin'ny andrasana amin'ny hafanan'ny famokarana takian'ny Electrolux.
Ny HLQ dia mitaky fivoriambe iray manontolo ho famerenana mba hamolavolana ny famolavolana coil farany afaka mahazaka ireo fitambarana 12 rehetra voalaza eo amin'ny sarinao. Ilaina ny mahafantatra sy mahita ny fisehoan-javatra eo anelanelan'ny fantsom-pifandraisana mba ho brazed sy ny fizarana vy compressor mba hiantohana fa ny trano vy dia tsy misy fiantraikany amin'ny vokatry RF vokarina noforonina teo amin'ny coil entana. Ity famolavolana farany ity dia mety mitaky fampidirana fitaovana ferit ao anaty coil izay hampifantoka ny sahan'ny RF amin'ireo fitarihana varahina fa tsy amin'ny trano vy.
Ny fitsapana voalohany dia vita tamin'ny DW-UHF-10kW amin'ny fampiasana coil laboratoara misy. Ny coil famokarana dia ho hita ao anaty trano tsy misy fitarihana izay mamela ny mpandraharaha hampiasa azy io hametraka ny coil manoloana ny fitarihana varahina ho an'ny toerana fanafanana marina sy tsara ho an'ny fizotran'ny asa. Ny famolavolana coil famokarana dia hampiditra fitarihana fohy kokoa noho ny coil test ary hamboarina mba hanatsarana ny tsingerin'ny hafanana (fe-potoana fohy kokoa).
Fiara vy mifono vy amin'ny induction